Shina mametaka horonantsary mampivarahontsana PP Spunbond Kodiarana lamba tsy manenona ho an'ny orinasa sy ny fanamboarana trano fitokana-monina | ShiningPlast
Film Coating Polypropylene Spun-bond Nonwoven lamba dia vokatra lehibe ataontsika nandritra ny am-polony taona lasa izay tany amin'ny faritra lamba tsy roa. Indrindra, nandritra ny Epidemelina COVID-19, ny takelaka sarimihetsika PP Spun-bond tsy misy lambany novokarina tao amin'ny orinasa izahay dia nampiasaina be tamin'ny karazan-javamaniry rehetra amin'ny fiarovana mitokana.
Material: Sarimihetsika coating PE + PP Spunbonded lamba tsy roa
Ambany: Araka ny fangatahan'ny mpanjifa
Loko: Araka ny fangatahan'ny mpanjifa
Habe: 6 '* 8' / 8 '* 8' / 8 '* 10' Max ho 100 '* 100'
Fanontana: pirinty natao tamin'ny
Raha mila filokana sarimihetsika PP spunbond lamba tsy vita tenona ianao dia maniry ny hanohana anao amin'ny vokatra ambony indrindra amin'ny vidiny sy ny serivisy tsara indrindra.
Material Sarimihetsika coating PE + PP Spunbonded lamba tsy roa
sakany Araka ny fangatahan'ny mpanjifa
Famehezana vita miaraka amina taratasy 2 "na 3" ao anatiny sy polybag any ivelany.
· Mampihetsi-po: Ny rivotra vita amin'ny sarimihetsika PP spunbond lamba tsy vita tenona dia mamofona avokoa, izay ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny gony mitokana. Maivana sy mora ampiasaina ho an'ny fampiononana manokana.
· Anti-Bakteria: afaka misoroka ny fifindran'ny bakteria amin'ny alàlan'ny rano izany.
· Anti-static: Ny famaranana antistatic dia mahatonga ny lamba ho fananana anti-static.
· Sariaka ny tontolo iainana: Maimaimpoana loko maloto sy silicone
Hoditra tsy miendrika hoditra ao anatiny
Manaraka: Rovitra vita amin'ny lamba tsy misy tenona PP Spunbond ho an'ny karazana saron-tava rehetra
Lamba tsy roa
Lamba Nonwoven lamba
Horticulture Nonwoven lamba
Lamba vita amin'ny tontolo iainana tsy roa